एपीएफ टोलीद्वारा लागूऔषधसहित पक्राउ सुनसरी, सुनसरी जिल्लाको कोशी गाँउपालिका १ बाट भाद्र २६ गते एपीएफ टोलीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही जिल्लाको ईटहरी उपमहानगरपालिका ३ बस्ने ३२ बर्षिय विकास लिम्बु छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट लौकहीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । को. २८ प ९२९१ नम्बरको मोटरसाईकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज लिम्बुको साथमा स्मास्मो तीन वटा र डाईनेक्स डिसी एक बोतल फेला परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका लिम्बुलाई बरामद लागूऔषधसहित आवश्यक कारवाहीको लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाइएको छ ।
सुनसरी, सुनसरी जिल्लाको कोशी गाँउपालिका १ बाट भाद्र २६ गते एपीएफ टोलीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही जिल्लाको ईटहरी उपमहानगरपालिका ३ बस्ने ३२ बर्षिय विकास लिम्बु छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट लौकहीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । को. २८ प ९२९१ नम्बरको मोटरसाईकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका निज लिम्बुको साथमा स्मास्मो तीन वटा र डाईनेक्स डिसी एक बोतल फेला परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका लिम्बुलाई बरामद लागूऔषधसहित आवश्यक कारवाहीको लागि स्थानीय प्रहरीमा बुझाइएको छ ।